आफ्नो ,क्षमता देखाउन किन्नरको भुमिकामा देखिएका चर्चित कलाकार…. – News Nepali Dainik
आफ्नो ,क्षमता देखाउन किन्नरको भुमिकामा देखिएका चर्चित कलाकार….
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७ समय: २२:००:०८
*#*#मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड फिल्ममा यस्ता केयौं कलाकार छन्, जो अभिनय र भूमिकाका लागि लोकप्रिय छन् । केही अभिनेताले फिल्मको आशा भन्दा विपरित गएर पनि काम गरेका छन् । अर्थात् पुरुष अभिनेताहरु महिलाको भूमिकामा देखिएका छन् । उनीहरुको त्यो अभिनयले दर्शकबाट राम्रो तारिफ पाएको छ ।
***महेश मान्जरेकर बलिउडका सानदार कलाकार हुन् । उनको जन्म १६ अगष्टमा भएको हो । उनले सन् २०१३ मा रिलिज फिल्म ‘रज्जो’मा किन्नरको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए । फिल्ममा कंगना रनावत र पारस अरोडा प्रमुख भूमिकामा थिए । यो फिल्मले बक्सअफिसमा खासै कमाल गर्न सकेन ।
,***हालका दिनमा सन् १९९१ मा रिलिज महेश भट्टको फिल्म ‘सडक’को सिक्वेलको चर्चा छ । यो फिल्मको पहिलो संस्करणमा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर भिलेनको भूमिकामा देखिएका थिए । यो फिल्ममा उनले निभाएको किन्नरको भूमिका आज पनि उत्तिकै सम्झनायोग्य छ । यो फिल्मका लागि सदाशिवले बेस्ट निगेटिभ भूमिकाका लागि फिल्मफेयरको अवार्ड पनि जितेका थिए । सदाशिवको निधन भइसकेको छ ।
*#*#,अभिनेता आशुतोष राणाले प्रख्यात किन्नर राजनेता शबनम मौसीको जिन्दगीमा आधारित फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । यो फिल्मको नाम ‘शबनम मौसी’ थियो । फिल्ममा उनले किन्नरको भूमिकामा नै अभिनय गरेका थिए । शबनम यस्तो पहिलो किन्नर हुन्, जसले चुनाव लडेर जित हासिल गरेका थिए । यो फिल्म सन् २००५ मा रिलिज गरेको थियो ।
***सन् १९९७ मा रिलिज फिल्म ‘तमन्ना’मा अभिनेता परेश रावलले किन्नरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । फिल्मको निर्देशक महेश भट्ट हुन् । फिल्ममा पूजा भट्ट, शरद कपूर र मनोज बाजपेयीको मुख्य भूमिकामा अभिनय थियो । किन्नरको भूमिकामा परेश रावललाई सबैले मनपराएका थिए ।
,#,#अभिनेता प्रशान्त नारायणनले इमरान हाशमी र ज्याकुलिन फर्नान्डिजको फिल्म ‘मर्डर २’मा स्मरणीय अभिनय गरेका छन् । फिल्ममा उनी किन्नरको भूमिकामा थिए । सन् २०११ मा रिलिज यो फिल्ममा उनी भिलेन थिए ।
***अभिनेता रवि किशन बलिउड र भोजपुरी फिल्मका चर्चित कलाकार हुन् । उनले सन् २०१३ मा रिलिज फिल्म ‘बुलेट राजा’मा किन्नरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । फिल्ममा सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा र जिमी शेरगिलको अभिनय थियो ।
Last Updated on: January 25th, 2021 at 10:00 pm